Cumar Filish oo dhagax dhigay dhismaha Mashaariic laga hirgelinayo Muqdisho (Sawirro) | Somalia News
Ciidamada Kumaandooska oo shaaciyay magaca Horjooge ka tirsan Alshabaab oo ay howlgal ku dileen
Taliska ciidamada Danab ayaa shaaciyey inay howlgal ku dileen horjooge ka tirsan Alshabaab, kaasoo qabilsana Arrimaha Maaliyada. Howlgalka ayey ciidamada Danab ka fuliyeen tuullooyin ku yalla inta u haxeysa degmooyinka Balcad iyo Afgooye oo ka kala tirsan gobollada Shabeellada dhexe iyo Shabeellada hoose. Waxaa Howlgalka lagu dilay ila 6 maleeshiyo oo ka tirsanaa Ururka Alshabaab iyo horjoogihii watay. Ad “Horjoogaha oo lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Cabadalla (Abuu Ayman) ayaa lacagaha baadda ah ka qaadi jiray dadka shacabka, si ay ugu adeegsadaan dhibaataynta shacabka oo ay ugu horayso qaraxyada ay la beegsadaan goobaha ay ku badanyihiin rayidka.” ayuu yiri sarkaal ka tirsan ciidamada Danab. Horjoogaha la dilay ayaa Al-shabaab u qabilsanaa dhanka so uruurinta lacagaha islamarkaana Ururka ku fulin jireen weerarada iyo ismidaaminta. Sido kale howlgalka ayaa lagu burburiyay saldhigyo ay lahaayeen Kooxda. Warar Xul ah
Musharrax Joe Biden oo Soomaaliya ka Saarayo liiska Madow
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Muqdisho (Caasimada Online) – Musharraxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden ayaa qorsheynaya in uu dalka Soomaaliya ka saaro liiska madow ee uu horay ugu daray madaxweynaha wadanka Mareykanka ee hadda haya talada dalkaasi, Donald Trump. Machadka Heritage Foundation oo warbixin cusub soo saaray ayaa tilmaamay in marka loo doorto xilka madaxweynaha kadib uu Biden doonayo in dalal badan oo ay ugu horreyso Soomaaliya uu ka qaado xayiraada socdaalka Mareynkanka ee lagu soo rogay. Heritage ayaa warbixintiisa ku sheegay in musharrax Joe Biden qorshihiisa ugu ballaaran uu yahay sidii meesha looga saari lahaa xayiraada dhanka socdaalka Mareykanka ka wadamada kala ah Soomaaliya, Ciraaq, Iiraan, Liibiya iyo Yemen. Lixdaasi dal ayaa waxaa horey culeys u saaray madaxweyne Donald Trump, isaga oo Mareykanka ka mamnuucay muwaadiniintaasi dalkaasi, isaga oo shaaciyey inay ku badan yihiin waxa loogu yeero argagixisada. Warbixinta ka soo baxday Machadka Heritage Foundation ayaa waxaa lagu shaaciyey haddii Biden la doorto uu sidoo kale gudbin doono soo jeedin ku aadan qorshe muwaadinimada Mareykanka ku helayaan 11 milyan oo muhaajiriinta aan sharciga heysan. Musharraxa xisbiga Dimuqraadiga ayaa sidoo kale doonaya inuu gabi ahaan meesha ka saaro qorshaha uu Trump ku doonayo inuu ku baabi’iyo barnaamijka waalidiinta ay caruurtooda ku heysanyaan, markii ay galaan gudaha wadanka Mareykanka. Si kastaba Mareykanka ayaa isku diyaarinaya doorashada madaxtinimo ee dalkaasi oo hal todobaad kadib loo dareeri doono, taas oo ay ku loolami doonaan Musharrax Joe Biden iyo madaxweynaha hadda talada haya Donald Trump oo yeeshay doodo adag oo foolka fool ah. Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber
Maamul Gobolka Banaadir ayaa tababaraha kooxda Gobolka Banaadir ee ka qeyb galaysa tartanka kubbadda cagta Maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir u magacaabay ciyaaryahankii hore Xulka Qaranka Soomaaliya Daadir Amiin Cali oo iminka ah Guddoomiyaha isboortiga degmada Xamar Jajab,sidoo kalane ah tababaraha naadiga Geeska Afrika. Xasuusin:-Aqriso Macallin Daadir oo Muqdisho kula guulaystay Horyaalka Daadir Amiin “Taariikh Wanaagsan Ayay Ii Tahay Hanashada Horyaalka ” Daadir Amiin ayaa sameeyay taariikh wanaagsan,isagoo kooxda Geeska Afrika u soo saaray horyaalka Soomaaliya,sidoo kale naadiga Muqdisho City Club kula guulaystay horyaalka Soomaaliya. Sidoo kale Daadir oo Geeska U Qaaday horyaalka 2aad ee Soomaaliya Daadir Amiin “Waan Ku Faraxsanahay Hanashada Horyaalka Heerka Koowaad Ee Soomaaliya ” “Waan ku faraxsanahay xilkan waa shaqo adag oo u baahan in laga gaaro guul,waxaan u mahad celinaynaa maamulka isboortiga Gobolka oo xilka igu aaminay,waxaana rajayn doonaa in aan gaarno guulo waaweyn waqtiga dhaw” ayuu Goobjoog Sports u sheegay Macallin Daadir Amiin Cali. Maxamed Xuseen Qalinle
Ciidanka DF oo Howlgal qorsheysan ku Khaarijiyay Madaxii Maaliyadda Al-Shabaab ee..
Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Ciidanka Kumaandooska Danab ee xoogga dalka ayaa howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen deegaanno hoostaga dagmooyinka Balcad iyo Afgooye oo ka kala tirsan gobollada Shabeellada dhexe iyo Shabeellada hoose, waxay ku dileen 6 ka tirsan Al-shabaab oo uu ku jiro Madaxihii maaliyadda Shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose. War kasoo baxay taliska Ciidanka xoogga ayaa lagu sheegay in shaqsiga la dilay lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Cabadalla (Abuu Ayman). Waxaa warka lagu sheegay in uu qaabilsanaa aruurinta Canshuuraha Al-Shabaab gobolka Shabeellaha, islamarkaana lala dilay qaar ka mid ah ilaaladiisa. Ciidanka ayaa intii ay howlgalka ku jireen waxey burburiyeen saldhigyo ay la haayeen Al-shabaab. Ciidanka ayaa tilamaamay in ay soo saareen Miinooyin Al-Shabaab ay galiyeen wadooyinka oo ay doonayee in ay la beegsadaan taliska Ciidanka xoogga. Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Al-Shabaab oo ku aadan warka Ciidanka dowladda ee ah in ay dileen Mas’uul ka tirsanaa Shabaab. Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp
Waxaa Maanta Garoonka Kubada Cagta ee Eng. Yariisow Stadium ka furmay Tartanka Kubada Cagta ee Degmooyinka Gobolka Banaadir 2020, kaasi oo sanadkaan markii ugu horeysay ay ka qeyb-galayaan Naadi ka socda Degmada Balcad. Kusimaha Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Guddoomiye Kuxigeenka Maamulka iyo Maaliyadda Axmed Xasan Iimaan iyo Wasiirka Magacaaban ee Dhalinyarada iyo Isboortiga Xamsa Maxamed Xamsa ayaa si wadajir ah u furay, iyadoona ay ku wehliyeen Guddoomiye Kuxigeenka Arrimaha Bulshada iyo Wacyigelinta Basma Caamir Axmed iyo Guddoomiye Kuxigeenka Howlaha Guud Eng. Cumar Cali Cabdi. Guddoomiyaha Isboortiga Gobolka Banaadir, Guddoomiye Kuxigeenka Xiriirka Kubada Cagta, Guddoomiyeyaasha Degmooyinka Gobolka Banaadir, Agaasimeyaal kantirsan Dowlada Hoose ee Xamar Cayaartoy hore, Marti Sharaf iyo Qeybaha kala gedisan ee Bulshada ayaa Garoonka ku sugnaa, Waxaana Halkaasi Astaanka Calanka ku tumay Ciidanka Daambeeda Booliska Soomaaliyeed. Wasiirka Ciyaaraha iyo dhalinyarada Dowladda mudane Xamse Saciid Xamse iyo madaxda Gobolka Banaadir ayaa kooxaha ka qeyb-galaya Tartanka u rajeeyay in ay Cayaar wanaag soo bandhigaan inta uu socdo Tartanka Kubada Cagta ee Degmooyinka Gobolka Banaadir 2020.
Cumar Filish oo dhagax dhigay dhismaha Mashaariic laga hirgelinayo Muqdisho (Sawirro)
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa dhagax dhigay dib u habeyn lagu sameynayo xarunta ciidanka ilaalada deegaanka Xamar iyo Dad dhigista ee degmada Shangaani.
Dhagax dhigga guddoomiyaha waxaa ku wehlinayay ku xigeenka howlaha guud ee gobolka Mudane Cumar Cali Cabdi iyo saraakiil ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka Xamar.
Taliyaha ilaalada deegaanka Xamar Cabdinaasir Maxamuud Indha-qarshe ayaa guddoomiyaha gobolka uga mahad-celiyay in maamulkiisu uu isku howlo sidii dib loogu dhisi lahaa xarunta ilaalada deegaanka iyo waaxda Dad dhigista.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa tilmaamay in xarunta ilaalada deegaanka Xamar iyo Waaxda Dad dhigista muddo yar ka hor la dayactiray balse maadaama ay badda saarantahay ay ku dhaceen biyaha sidaasna ay ugu ekaatay in aan hore loo dayactirin isagoo sheegay in hadda ay dib u habeyn ku sameyn doonaan.
Previous articleYuusuf Garaad Cumar: “Aniguba mar baan dhacay”
Next articleGo’aan Lama filaan ah uu maanta qaatay Madaxweyne Biixi
Ra’iisul wasaare Rooble oo maanta golihiisa wasiirada horgeynaya BF Soomaaliya
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa saacadaha soo socda ee maanta la filayaa in golihiisa wasiirada cusub uu horgeeyo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Kulanka oo goor dhow ka furmi doono xarunta Villa Hargeysa ee Muqdisho ayaa waxaa lagu war-geliyey dhamaan xildhibaanada inay soo xaadiraan, si ay cod ugu qaadaan meel marinta xukuumadda cusub oo ay u taallo shaqo adag oo ay ugu horreyso doorashada. Ra’iisul wasaare Rooble ayaa golaha ka codsan doono inay codkooda siiyaan wasiirada cusub, kadibna wuxuu u caddeyn doonaa tallaabada ugu horreysa ee uu qaadayo. Golaha wasiirada oo lagu dhowaaqay todobaadkii la soo dhaafay ayaa isugu jira qaar ka mid ah golihii wasiirada xukuumaddii ra’iisul wasaare Khayre iyo kuwa cusub. Sidoo kale waxaa maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ka socday kulamo taageero loogu raadinayey xukuumada cusub ee ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo sidii ay u heli laheyd codka kalsoonida. Dhowaan madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale baarlamaanka federaalka ugu baaqay inay codkooda ku taageeraan xukuumadda, si ay gudato waajibaadka hor yaalla. Soomaaliya ayaa haatan isku diyaarineyo doorashooyin, iyadoo lagu soo dhoweynayo waqtiga loo qorsheeyey in la qabto oo ay horey heshiis uga gaareen madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya, kuwa dowlad goboleedyada ka jira dalka iyo gobolka Banaadir. Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber
XOG: Cumar Filish oo Cisbitaal loola cararay & Sirculus oo laga helay Caafimaadkiisa
Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud (Cumar Filish), ayaa dalka dibadiisa u amba-baxay ka dib markii ay la soo derseen Xaalado caafimad daro oo uu ka shaqeyn waayay. Dad ku dhow, Duqa Muqdisho ayaa inoo sheegay in Cumar Filish uu aaday dalka Turkiga si uu daawo ugu helo xanuun dhowr ah oo isbiirsaday oo maalmihii u dambeeyay ku sii xoogeysanayay, kuwaas oo ay ka mid yihiin Xanuuno ka haya Caloosha sida (Gaas). Warbaahinta gudaha ayaa laga qariyay safarka caafimaad ee Guddoomiyaha gobolka Banaadir uu ku aaday dalka Turkiga, waxaana maalmihii u dambeeyay baraha Bulshada lagu arkayay, guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Axmed Xasan Iimaan oo loogu yeerayay ku-simaha Duqa Muqdisho. Ilo xog ogaal ah ayaa inoo sheegay in, tan iyo markii Duqa Muqdisho loo dhiibay xilkan uu ahaa Bukaan socod,islamarkaana shirar muhiim ah uu kaga baaqday xaalad caafimaad daro oo soo wajahday. Cumar Filish oo caan ku ahaa dagaaladii soo maray dalka qeybta uu ku lahaa, ayaa hadda hoggaaminaya saddexda milyan ee ku dhaqan gobolka Banaadir, kuwaas oo sheegaya ineysan ka helin waxyaabihii ay ka filayeen markii la magacaabayay. Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp
Muxuu Salka ku Hayaa Qalalaasaha Hafiyay Nigeria
October 24, 2020 | Published by: yaska Debedbaxyada lagaga soo horjeedo tacaddiyada boolisk ee ka soconayay waddanka Nigeria ayaa Abuuray dhaqdhaqaaq xooggan oo u muuqanayay inuu gilgilay dadka awoodda haya, Hasayeeshee laba todobaad oo buuq ah kaddib, tifaftiraha Laanta Afka Hausa-ha ee BBC-da, Aliyu Tanko, ayaa eegaya Wixii ka Dambayn doona Xaaladsan. Isu soo baxyo waddooyinka lagu dhigayay iyo gadood dhinaca baraha ay bulshadu ku wada xidhiidho ah ayaa da’yarta Nigeria waxa ay siisay cod meesha ka saaray kala duwanaanshiyaha dhaqanka ee dalkaasi. Markii hal ku dhigga #EndSARS uu aad u shaacbaxay, ayaa sidaas waxaa lagu caasiyay kooxaha gacanta ku haya siyaasadda dalkaasi. In la burburiyo goobta sida wayn loo qadariyo ee oba, ama hogaamiye dhaqameedka Lagos, ayaa astaan u aheyd arrintaasi. Dhalinyarada ayaa meelaha wareejinayay carshigiisa, waxa ay xadeen hantidiisa, sidoo kalana waxa ay ku dabaasheen meesha uu ku dabaalan jiray. Wax ku bilowday dibadbax lagaga soo horjeedo waaxda booliska ee gaarka ah ee ka hortagta dhaca (Sars) Ee la necebyahay ayaa noqday dhabihii ay dhalinyaradu ku soo bandhigi lahaayeen cadhada ay u qabaan dadka Nigeria maamulayay muddo tobannaan sanadood ah, waxa ayna dalbadeen in isbadel la sameeyo. Madaxweynihii hore Olusegun Obasanjo ayaa Sannadkii 2017-kii waxa uu ka digay in “dhammaantayo aynu ku dul fadhinno fuusto baaruud ah” markii ay timaado arrimaha dhalinyarada. Hadalkiisaas waxa uu ula jeeday guud ahaan qaaradda hasayeeshee arrintaas waxa ay saamaynaysaa Nigeria, Oo ah dadka ugu dalka badan Afrika laguna qiyaaso dadkiisa 200 oo milyan oo qof, kuwaas oo in ka badan 60% ay ka hooseeyaan da’da 24. Inta badan dadka gaaray da’da shaqada ma haystaan shaqo caadi ah, fursadaha waxbarasho wanaagsan lagu heli karana waa ay yaryihiin. Bilowgii sanadkan, shaxda dowladda ayaa waxa ay muujisay in 40% dadka Nigeria ay ku nool yihiin saboolnimo. ‘Ma ahan caadifad mar uun iska kacday’ Hasayeeshee dadka haa tan awoodda haya ayaa markii hore khalad u fahmay waxa markan soconaya, qoraaga xuquuqda aadanaha u ololeeya, Gimba Kakanda ayaa BBCda u sheegay. “Debadbaxyada lagu dalbanayo in lagu soo afjaro tacaddiyada booliska ee la baxay #EndSARS ayaa markii hore waxaa loo arkay inay yihiin caadifaddii dhalinyada ee mar la aragta aheyd taas oo iska dhammaan doonto,” ayuu yidhi. “Fakarka noocaas ah ee xad dhaafka ah ee ku jira siyaasiyiinta ayaa sabab u ahaa jawaabta soo daahday ee laga bixiyay dhaqdhaqaaqan aan caadiga ahayn, iyagana ka soo xidhiidhiya fursadihii u furnaa.” Su’aasha ayaa waxa ay tahay xaguu dhaqdhaqaaqaas haatan aadayaa? Guusha dibadbaxa ee dowladda ku qasbay inay isbadello keento – sida in ay ballanqaado in la kala diro Sars, iyo isbadel ballaaran oo lagu sameeyo booliska – ayaa dhalinyarada Nigeria waxa ay ka heleen kalsooni, waxa ayna haatan rumaysan yihiin inay isbadel samayn karaan. Maalmihii ka horreeyay dibadbaxyada, kooxaha u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa waxaa u suuragashay inay sameeyaan goob dadka laga caawiyo haddii xaalad degdeg ah ay dhacdo. Sidoo kale adeeg dhanka sharciga ah ayey diyaariyeen oo la siiyo dadka u baahdo iyagoo weliba idaacad sameeyay. Arrimahaas waxaa lagu maalgeliyay iskaashi guud arrintaas oo tusaale u noqotay sida Nigeria ay u hagaagi karto haddii aanay siyaasiyiintu meesha ku jirin kuwaas oo badanaa u muuqda inay dantooda uun tahay sidii nafsadooda ay wax ugu heli lahaayeen, halkii ay dalka horumarin lahaayeen. Hasayeeshee dhinac xun oo ay dibadbaxyadu wataan ayaa jira. Halka dadka taageeray ee u soo baxay dhaqdhaqaaqa #EndSARS ay ahaayeen dad si nabadgalya ah u dibadbaxayay, haddana waxaa jiray qeyb ka mid ah dhalinyarada oo dibadbaxyada u arkayay inay fursad yihiinba. Arbacadii iyo Khamiistii la soo dhaafay ayaa boob iyo burburin waxaa lagula kacay ganacsiyada Lagos Waxa ay kharbudeen dukaamo, waxa ay u dhaceen bakhaaro halka ay bartilmaameedsadeen ganacsiyada ay leeyihiin siyaasiyiinta caanka ah Walow hab dhaqanka labada kooxood uu kala duwanyahay, haddana waxa ay ka midaysan yihiin: nacaybka ay u qabaan dadka maamulka haya. ‘Buhari waxa uu seegay dulucdii’ Mas’uuliyiintu waa ay ka warhayaan in saboolnimada iyo xaaladda adag ee jirta ay halis ku yihiin ammaanka qaranka, sida uu sheegayo Mr Kakanda oo xuquuqda u ololeeya. “Dowladda waxa ay xaqiiqsatay in carada noocan ah aanay dhayalsan karin sida hore u dhacday oo kale,” ayuu intaas ku daray. Hasayeeshee waxa ay sii wadday inay qaado tallaabooyin khaldan markii ay iskudayaysay inay xaaladda dajiso. Khudbaddii Madaxweyne Muxamedu Buhari uu dalka u jeediyay fiidkii Khamiistii “ayuu ku seegay dulucdii hadalka”, sida uu qabo Japheth Omojuwa oo barta internet-ka wax ku qora. Mr Buhari ayaa waxa uu ku baaqay in dibadbaxyada la soo afjaro oo wadahallo la bilaabo, hasayeeshee “waxaa lagu xasuusan doonaan inuu dadka Nigeria u hanjabay xilli ay dowladooda waydiisteen inay cadaalad samayso. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in hadda loo baahan yahay in isha lagu hayo isbadalka lagu sameynayo booliska Nigeria Sikasta oo uu xaal ahaadaba, Mr Omojuwa ayaa waxa uu rumaysan yahay in dhaqdhaqaaqa #EndSARS wax uun lagu gaadhi karo. Ma ahan in diiradda lagu saaro hammiga mustaqbalka fog ee ah in awood siyaasadeed lagu gaaro, ayuu ku doodayaa, hasayeeshee waa inay xaqiijiyaani n mas’uuliyiinta ay ka soo dhalaalaan isbadelka ay ballaanqaadeen, booliska habowsanna cadaaladda la horgeeyo. Tallaabooyinkaas yaryar ayaa laga yaabaa in ugu dambayntii ay dhalilyaan isbadel wayn.
Ciidanka Xoogga dalka oo howlgal ku dilay horjooge iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab
Muqdishu-(SONNA)- Ciidanka Kumaandooska Danab ee xoogga dalka ayaa howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen deegaanno hoostaga dagmooyinka Balcad iyo Afgooye oo ka kala tirsan gobollada Shabeellada dhexe iyo Shabeellada hoose, waxay ku dileen 6 ka tirsan maleeshiyada Al-shabaab oo uu ku jiro horjoogihii argagixisada u qaabilsanaa maaliyadda gobollada Shabeellooyinka. Horjoogaha oo lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Cabadalla (Abuu Ayman) ayaa lacagaha baadda ah ka qaadi jiray dadka shacabka, si ay ugu adeegsadaan dhibaataynta shacabka oo ay ugu horayso qaraxyada ay la beegsadaan goobaha ay ku badanyihiin rayidka. Ciidanka ayaa intii ay howlgalka ku jireen waxey burburiyeen goobo argagixisada Al-shabaab ay shacabka uga qaadi jirtay lacagaha baadda ah, iyagoo sidoo kalana soo saaray miinooyin maleeshiyadu ay ku aastay waddooyinka ay isticmaalaan shacabka.
Baroor-diiq loo sameeyay muftigii Dimishiq ee la khaarajiyay.